» संसद विघटन प्रस्तावको व्यापक विरोध, विघटनको विषयमा संविधानले के भन्छ?
संसद विघटन प्रस्तावको व्यापक विरोध, विघटनको विषयमा संविधानले के भन्छ?
५ पुष २०७७, आईतवार १२:१५
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल बाँकी हुँदै संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष शिफारिस गरेका छन् । यस निर्णयको राजनैतिक दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् भने आकस्मिक बैठकको आह्वान गरेका छन्।
यो सँगै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिन्छ कि दिदैन भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । सरकारको शिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिले शिफारिस कार्यान्वयन गर्छिन कि गर्दिनन् भन्ने विषयमा शंकाबाजी भइरहदा संसद विघटनबारे संविधान के भन्छ भन्ने सर्बत्र चासो छ । संसदको कार्याकाल बारे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ ले बोलेका छन् ।
हेरौं के छ धारा ७६ मा
के छ धारा ८५ मा?
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । संविधानका यी दुई प्रावधान बाहेक संसद विघटन हुने बिषय कतै उल्लेख छैन ।
धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएजस्तो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छैन । नत संकलटकालीन अवस्था नै विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो धारा अनुसार संसद विघटन गर्न सक्दैन ।
त्यसो भए धारा ८५ अनुसार पाइन्छ त ?
संविधानअगावै विघटन भएमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने यो धारामा उल्लेख छ । तर यो धाराले संविधान अगावै संसद कसरी विघटन हुन्छ भनेर बोलेको छैन । संविधान अनुसार विघटन हुन्छ भनिएपनि संविधान अनुसार विघटन हुने आधार भनेको धारा ७६ को उपधारा ७ को व्यवस्था मात्र हो ।
यो धारा को विद्यमानता हुन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आएको यो मुलुकमा संकलटकाल भएको हुनुपर्छ । हाल ओली नेतृत्वको सरकार यी कुनै पनि असजिलो अवस्थामा छैन । यसका कारण यो धारा अनुसार संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्छन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य ।
अव प्रश्न उठेको छ संविधान बमोजिम अगावै विघटन भनेको के हो ?
प्रधानमन्त्रीले कुन धारा अनुसार विघटनको शिफारिस गरे भन्ने विषय बाहिर आइसकेको छैन । तर संविधानका यी दुई धारा केलाउदा ओलीमा यो अधिकार भने कतै नभेटिएको आचार्य बताउँछन् ।